Hooyaday iyo ayeeyaday waxay dhahaan: “Haddii ay gabar fadhiisato ayada oo ay lugaheeda kala fogyihiin midaasi macnaheedu waxay tahay gabadhaasi ma ahaanayso mid bikrad ah.” Run miyaa arintaasi? – Tips for refugees
Previous Previous post: Waalidiintaydu waxay dhahaan Aniga oo (16) ah in aan aad uga digtoonaado gabdhaha saaxiibadayda ah ee Jarmalka u dhashay. Dhammaan waxay hore galmo ula sameeyeen wiilal. Ma yihiin waalidiintaydu kuwo sax ah?
Next Next post: Anigu inta baddan waxaan qabbaa calool xanuun ama madax xanuun. Waxaan dareemaa guud ahaan in aanan ficnayn. Dhakhtarku ima caawin karo. Hadda waxaa la iga rabaa in aan aado daaweyn cilmi nafsi ah. Miyaan waalanahay?